PU ဗဓေလသစ် မှအကောင်းဆုံး PU ဗဓေလသစ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ၏အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် PU ဗဓေလသစ် in Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်ရှိသမျှသောလောကီကိုတင်ပို့လျက်, သူတို့စူပါအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုခံစားကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးဝေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - CT-PU-43
မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိရေမှ PU အစေး
အဓိကအစိတ်အပိုင်း:aliphatic ရေ-အခြေပြု PU ဗဓေလသစ်
ရေ-TiO2 ကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့်အခြေခံထားသော PU ကိုအရောင်ငါးပိအဖြစ်မြေမှုန့်ဖြစ်စေနိုင်သည်,သို့သော်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီလိုက်ဖက်တဲ့အာရုံစိုက်ပေးပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/pu-resin.html
အကောင်းဆုံး PU ဗဓေလသစ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် PU ဗဓေလသစ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်